स्वास्थ्यकर्मी लाई कुट्न सजिलो छ – स्वास्थ्यकर्मी बन्न गाह्रो हुन्छ ? #Respect❣️
स्वास्थ्यकर्मी लाई कुट्न सजिलो छ, स्वास्थ्यकर्मी बन्न गाह्रो हुन्छ, अस्पतालमा अभद्र व्यवहार गर्नुअघि यो दृश्य सम्झऔं !! #respect ?❣️कठिन घडिमा पनि आफ्नो कर्तव्य प्रति इमानदार र चरित्रवान हुन सक्नुपर्छ।
अस्पतालमा स्वास्थ कर्मी माथि अभद्र ब्यबहार गर्नु भन्दा पहिला सोच्नुहोला उनिहरुको पनि आफ्नो परिवार हुन्छ हामी हरुको जस्तै हामिले स्वास्थ कर्मीहरुलाइ भगवान समान लिनु पर्छ । आफ्नो ज्यानलाइ दाउमा राखेर स्वास्थ कर्मीहरुले सेवा गरिरहेका हुन्छ्न ।
होला उनिहरुले चाहादा पनि बचाउन नसके का हजारौ पीडित हरु हुन्छ्न आफ्नो परिवार गुमेको मा सबैलाइ पिडा हुन्छ हामिले सहनु पर्छ । त्यसैले हामी सबै मिलेर अगाडि बड्नु पर्छ सिएन चौतारी परिवार सबै लाइ आव्हान गर्दछौ सबै ले एक अर्कामा रेस्पेक्ट को भाबना जगाउनु पर्छ धन्यवाद ।